အလုပ် မြန်မာ - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ဝယ်ယူသူဝန်ဆောင်မှုအကူ အလုပ်အကိုင်များ
စက်ရုံနှင့် အထည်ချုပ် (60)
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ကွန်ပျူတာ 2
လက်ဝတ်ရတနာနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်း 2
အလုပ် 32 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
Customer Service Representative(FB)
ဝယ်ယူသူဝန်ဆောင်မှုအကူ | Junior Customer Service, Reception
To handle/answer FB comments and complaints from messenger To proviide Assist to team members in handling difficult issues To communicate and follow up via croos departments To open tickets and take neccessary follow up action Immediat report to Calll center manager
အကျိုးအမြတ်: Overtime, Awards
Recruiter active 22 hours ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Best Choice Auto Body
၁၀တန်းအောင်ပြီး English အရေးအဖတ်တတ်ရမည်။ Computer Knowledge ရှိရမည်။ အသက်(၂၀) မှ(၂၅)အတွင်းရှိရမည်။ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွတ်တတ်သူဖြစ်ပြီးဖျတ်လတ်တတ်ကြွရမည်။
အကျိုးအမြတ်: အလုပ်ချိန်မနက်(၈း၃၀) ညနေ(၅း၃၀) တစ်ပတ်တစ်ရက်နားရမည်။ Uniform ပေးမည်။ လစာညှိနှိုင်း
တင်သောနေ့: 01 Dec 2021
Recruiter active 48 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
- တယ်လီဖုန် သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် ရောက်လာသည့် ဧည့်သည်များကို ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကာ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းများ ဖြေကြားခြင်း - လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ လိုက်နာခြင်း၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု မှတ်တမ်းစာအုပ် နှင့် ဧည့်သည် တံဆိပ်များ ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ဝန်ထမ်း နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များကို ထိန်းသိမ်းလိုက်နာခြင်း - House Phone နှင့် Console Operationအတွက် အဖွဲ့အစည်း၏ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်အား ထိန်းသိမ်းခြင်း - လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဥ်းများနှင့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် လုံခြုံပြီး သန့်ရှင်းသော Reception ဧရိယာကို ထိန်းသိမ်းခြင်း - မှတ်တမ်းပြုခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း နှင့် ဆက်စပ်လိုအပ်ချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြင့် အလုပ်အဖွဲ့များကြားတွင် စဉ်ဆက်မပြတ်ထိန်းသိမ်းခြင်း - အသင်း၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေရန် ဆက်စပ်ရလဒ်များကို လိုအပ်သည့်အတိုင်း ပံ့ပိုးကူညီခြင်း - စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၏ လိုအပ်သည့် အခြားဆက်စပ်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း - မတော်တဆမှုများ နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေများကို စီမံခန့်ခွဲရေးမန်နေဂျာ နှင့်/သို့မဟုတ် အထွေထွေမန်နေဂျာများထံ အကြောင်းကြားခြင်း - စီမံအုပ်ချုပ်မှုမန်နေဂျာ နှင့်/သို့မဟုတ် အထွေထွေမန်နေဂျာများထံ အစီရင်ခံရန် မှ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာခြင်း
အကျိုးအမြတ်: *Yearly Bonus *စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ဆုလာဘ်များ *ယူနီဖောင်း
တင်သောနေ့: 26 Nov 2021
Recruiter active 20 hours ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ရမည်၊၊ စကားပြောချိုသာရမည်။ Cutomer Complain ကိုကောင်းမွန်စွာပြန်လည်ဖြေရှင်းတက်ရမည်၊၊
အကျိုးအမြတ်: အလုပ်ချိန်မနက်(၈း၃၀) ညနေ(၅း၃၀) တစ်ပတ်တစ်ရက်နားရမည် Uniform ပေးမည်။
Junior And Senior Customer Service (Bamaw)
ဗန်းမော် | ကချင်ပြည်နယ် ကချင်ပြည်နယ်
-KYC အပ်ဒိတ်နှင့် Booking data Sheetရှိ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးပြီး အပ်ဒိတ်လုပ်ရန်ဆောင်ရွက်ရမည်။ -ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲသူများ စိတ်ကျေနပ်မှုရှိစေရန် သေချာစေရန်ဆောင်ရွက်ရမည်။ -KYC ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကို စောင့်ကြည့်ရမည်။ -KYC ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဘဏ်ဘက်မှ (Maker- Checker) ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ရမည်။ -Ensure the effective communication between stakeholders [bank side (Maker-Checker), KBZPay side & KBZPay call center ] -Arrange floor plan for customer convenience (together with bank side) -To perform all of duties assigned by supervisor -To train staff regarding their individual needs for work operation. -Handle complaints and provide appropriate solutions for customer satisfactory
အကျိုးအမြတ်: Quarterly Bonus ပေးမည်။
Recruiter active 16 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Elotus Medical Laboratory and Diagnosis
Computer ကၽြမ္းက်င္စြာ သုံးတက္ရမည္ စာရင္းမ်ားေသခ်ာစြာ စနစ္တက် မွတ္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္ လူနာမ်ားအေပၚ ေႏြးေထြးစြာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သူျဖစ္ရမည္ Customer complain မ်ားအားေျဖရွင္းႏိုင္သူျဖစ္ရမည္
- Hotel ပိုင်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ - Check in/ Check out procedureအားနားလည်ရမည်။
Shwe Lamin Nagar Co.,Ltd.
ကျောက်တံတား | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
Customer လာပြသောစက်များကို Error အလိုက် Hardware , Software ပြုပြင်ပေးခြင်း။ Software များကို Installing လုပ်ပေးခြင်း။ In warranty အတွင်း ပစ္စည်းများ (သို့) warranty မရှိသည့် ပစ္စည်းများအား RMA Team နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
အကျိုးအမြတ်: - အချိန်ပိုကြေး
ပြည် | ပဲခူးတိုင်း ပဲခူးတိုင်း
Customer များနှင့် ဆက်ဆံရေး ရေရှည်ကောင်းမွန်စေရန် လုပ်ဆောင်ရမည် Customer များ စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန် သူတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို လေ့လာသုံးသပ်ရမည် Customer များ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပြီး စိတ် ေကျနပ်မှုရရှိ အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် လိုအပ်သလို မိမိ အထက်လူကြီးများကို တင်ပြရန် KBZPay နှင့် အခြား service များအကြောင်း မျှဝေပေးရမည် လိုအပ်သလို ပုံမှန်မဟုတ်သော အခြေအနေများဖြစ်သည့် (health of customers, employees, or other specious situations)များကို သက်ဆိုင်ရာ သို့ သတင်းပို့ပေးရမည် Develop and maintain the customer relationship Identify and assess customers' needs to achieve satisfaction Handle complaints and provide appropriate solutions for customer satisfactory or inform senior assistant and supervisor Help customers to onboard the KBZPay and disseminate the awareness of inclusive product services To help with customer’s needs on KBZPay’s services Follow communication procedures, guidelines and policies Contribute to team effort by accomplishing related results as needed Report to senior assistant and supervisor if situations (health of customers, employees, or other specious situations) are unusual.
အကျိုးအမြတ်: Quarterly Bonus
ABC Content Solution Co.,Ltd (Mahar Mobile)
စမ်းချောင်း | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
Mahar Mobile Application နွင့္ပက္သက္၍ အသုံးျပဳပုံနည္းလမ္းမ်ားအား ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းျခင္းမ်ားအား စိတ္ရွည္စြာရွင္းျပေပးရမည္ User complain မ်ားအား စိတ္ရွည္စြာေျဖရွင္းေပးရမည္
အကျိုးအမြတ်: - Lunch Provided
Customer Service Officer (NPT)
မင်္ဂလာသိဒ္ဓိ | နေပြည်တော် နေပြည်တော်
- Bank Product များ၊ Serviceများ နှင့် transaction execution များကို customerများမွ ဖုန်းဖြင့်မေးမြန်သောအခါ ဖြေကြားပေးရမည်။ - Bank Product များ။Transaction များ နှင့် မေးမြန်းလာသော Complaintsများအားရှင်းပြရမည်။ - Customer များ ပြောပြလာသော ပြဿနာများအတည်ပြုခြင်း၊ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကိုအကြံပြုခြင်း နှင့် အောင်မြင်စွာ ဖြေရှင်းပြီးမပြီးကို follow up လုပ်ရန် - ဖောက်သည်များနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၊ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ၊ အကြံပြုချက်များနှင့် တိုင်ကြားမှုများ မှတ်ချက်များနှင့် ဖြေရှင်းချက် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ - Keep abreast of product knowledge to ensure information is given to customers in accurate manner - Actively monitors and maintains high level of customer satisfaction through continuous reinforcement and improvement of service standards. - Prepare report periodically by collecting and analyzing customer information - The role holder is responsible for answering incoming calls to provide information about Bank products, performing transactions and addressing complaints.
အကျိုးအမြတ်: "Performance ပေါ်မူတည်သော ဆုကြေးများရှိမည်။ "
Golf Lounge Attendant
Greeting with Hotel standard, welcoming and interacting with guests, providing information and also assisting them as and when required. Escort the golfers to golf-related areas upon arrival Demonstrate operational knowledge of Golf simulator equipment offered and possess the ability to explain all options to guests. Explain the guests regarding fees, facility reservations, golf course regulations and procedures. Document any damage and deficiency for technician’s review. Offer professional services to guests in proper use of the facility. Properly clean and store golf clubs after using Assists the Golf In-charge with day to day golf operations and maintenance. Report any lost and find items to the Housekeeping department. Collects debris, monitor restroom & pantry cleanliness and other facilities in the area. Notifies Screen Gold In-charge and prepare incident reports in case of any injuries, accidents, property damage or other problems at the area. Assists in the closing of all operational facilities.
အကျိုးအမြတ်: - Meal Allowance - Uniform Allowance - Ferry Provide
Junior And Senior Customer Service (Mawlamyine)
မော်လမြိုင် | မွန်ပြည်နယ် . မွန်ပြည်နယ် .
Have to solve software related issue Have to communicate with related department upon issues Have to use software/system to solve issue Report Daily/Weeky/Monthly issue Work with IT team for issue management Will participate in app testing
အကျိုးအမြတ်: - Lunch Provided -Off day - Saturday (alter), Sunday (Gazette Holiday)
တာမွေ | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
- Computer Microsoft Office,Internet & Email ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - အပြောအဆိုယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ - Problem Solving Skill ကောင်းမွန်ပြီး၊ Customer complain များကိုဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။ - ရုံးချိန် - တနလ်ာ မှ စနေ (9 am to5pm) - လစာညှိနှိင်း
Junior Assistant- Customer Service (NPT)
-customer relationshipကို တည်ဆောက်ပြီး ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ -ဖောက်သည်များ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိရန် လိုအပ်ချက်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး အကဲဖြတ်ရမည်။ -တိုင်ကြားချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီး ဖောက်သည်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိစေရန်အတွက် သင့်လျော်သောဖြေရှင်းမှုများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) senior assistant နှင့် supervisor အား အကြောင်းကြားခြင်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ -customerများအား KBZPay တွင်ပါဝင်နိုင်ရန်နှင့် ပါဝင်သော ထုတ်ကုန်ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်း ရှင်းပြနိုင်ရမည်။ -To help with customer’s needs on KBZPay’s services -Follow communication procedures, guidelines and policies -Contribute to team effort by accomplishing related results as needed -Report to senior assistant and supervisor if situations (health of customers, employees, or other specious situations) are unusual.
အကျိုးအမြတ်: Performance ပေါ်မူတည်သော ဆုကြေးများရှိမည်။
Junior And Senior Customer Service (Pyin Oo Lwin)
ပြင်ဦးလွင် | မန္တလေးတိုင်း မန္တလေးတိုင်း
Youth International University
- ဧည့်သည်များအား လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ နှုတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ကြိုဆိုပါသည်။ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို ဖြေကြားခြင်း သို့မဟုတ် ရည်ညွှန်းခြင်း။ - လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ရမည်။ - တယ်လီဖုန်းနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ပြောဆိုဆက်ဆံရေး အထူးကောင်းမွန်ရမည်။ - ဖိုင်တင်ခြင်း၊ မိတ္တူကူးခြင်း စသည်ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုလုပ်ဆောင်ချက်များ။
အကျိုးအမြတ်: * စွမ်းဆောင်ရည်ကျော်မှုအတွက်ဆုမျာ
တင်သောနေ့: 03 Nov 2021
Dream Job Myanmar Co., Ltd.
• အဝင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အများအပြားကို Manage လုပ်ခြင်း။ • Sales Leadsများကို ရှာဖွေခြင်း။ • Customerများ၏လိုအပ်ချက်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိရန် အကဲဖြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။ • Customersများ သုံးစွဲသူအကောင့်များနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သောဆက်ဆံရေးနှင့် ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ခြင်း။ • Right Methods/Toolsများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် တိကျမှန်ကန်ပြီး ပြည့်စုံသော အချက်အလက်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။ • Personal/Customer Service Teamများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။ • customer complaintsများကို handleလုပ်ပေးခြင်း ၊ အချိန်ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း သင့်လျော်သော ဖြေရှင်းနည်းများနှင့် အခြားရွေးချယ်စရာများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။ • customerနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမှတ်တမ်းများ၊ process customer accountsနှင့် file documentsများကို သိမ်းဆည်းခြင်း။ • communication procedures, guidelines, and policiesများကို လိုက်နာခြင်း။ • customerများနှင့် Relation ကို ရေရှည်တည်တံ့စွာ ထိန်းထားနိုင်ခြင်း
အကျိုးအမြတ်: စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ဆုလာဘ်များ
- အများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတက်ပြီး မိမိ၏လုပ် ဖော်ကိုင်ဖက်များအား ဦး ဆောင်နိုင်သည့်အရည်အချင်းရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ - လုပ် ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်အား ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - အတွေ့အကြုံ၊ အရည်အချင်းပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိင်းပေးမည်။
ဖောက်သည်များထံမှ စာရွက်စာတမ်းများ လက်ခံရရှိပြီး အလုပ်ပြီးပါက ဖောက်သည်များထံ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခြင် client တစ်ခုစီအတွက် သီးခြား Job Follow Up တွင် အလုပ်အားလုံးကို အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်း (ဖုန်းနှင့် မေးလ်နှစ်ခုလုံး)
အကျိုးအမြတ်: - စွမ်းဆောင်ရည်လွန်မှုအတွက် ဆုလာဘ်
ကမာရွတ် | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
ပြင်ပဧည့်သည်များအား ကြိုဆိုခြင်း၊ နေရာချထားခြင်း ၊ ဧည့်ခံခြင်း MD နှင့် BOD အဖွဲ့ဝင်များအား ကြိုဆိုခြင်း အလုပ်လျှောက်သူများအား CV ဖြည့်စွက်နိုင်ရန် ကူညီပေးခြင်း လုပ်ငန်း/ဌာနအတွက် လိုအပ်သော ရုံးကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း
အကျိုးအမြတ်: ယူနီေဖာင္း - လမ္းစရိတ္/ဖယ္ရီ - အခ်ိန္ပိုေၾကး - ဥပေဒနွင့္အညီ ခြင့္ခံစားခြင့္မ်ား
လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော Data များကို Excel ဖြင့် စာရင်းသွင်းပေးရမည်။ Customer လာပြသောစက်များကို Error အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ Service Technician နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း။ ဖုန်းများ လက်ခံဖြေကြားပေးခြင်း။
အကျိုးအမြတ်: - ဘောနပ်စ် + ကော်မရှင် - အချိန်ပိုကြေး
- Customersများ၏ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် သင့်လျော်သော အပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်ထားကြောင်း သေချာစေရန် စစ်ဆေးရမည်။ - ရောင်းဝယ်ထားသော မစ္စည်းများ ကွာဟချက်များရှိသောအခါ Invoice များ ၊မူရင်းတောင်းဆိုမှုများကို စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်ပါက invoice အသစ် ပြင်ဆင်ရမည်။ - ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်း အချက်အလက်များ ပေးဆောင်ရန်၊ မှာယူရန် သို့မဟုတ် ထည့်သွင်းရန်၊ အကောင့်များကို ပယ်ဖျက်ရန် သို့မဟုတ် တိုင်ကြားမှုများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရယူရန်အတွက် သုံးစွဲသူများနှင့် တယ်လီဖုန်းဖြင့် သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် ဆွေးနွေးမည်။ - စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို တုံ့ပြန်ရန် သို့မဟုတ် တိုင်ကြားမှု ဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရလဒ်များနှင့် စီစဉ်ထားသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို အကြောင်းကြားရန် ဝယ်ယူသူများထံ ဆက်သွယ်မည်။ - Determine charges for services requested, collect deposits or payments, or arrange for billing; - Keep records of customer interactions and transactions, recording details of inquiries, complaints, and comments, as well as actions taken; - Obtain and examine all relevant information to assess validity of complaints and to determine possible causes; - Refer unresolved customer grievances to designated departments for further investigation; - Resolve customers' service or billing complaints by performing activities such as exchanging merchandise, refunding money, and adjusting bills; - Answer any questions the customer may have about available products and services - Establish new customer accounts, recording account information on written forms or digitally - Listen to customer concerns and complaints with the goal of identifying the causes of the problem
Myint Thukha Nadi A Group of Companies
မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
ဖောက်သည်များထံမှ စာရွက်စာတမ်းများ လက်ခံရရှိပြီး အလုပ်ပြီးပါက ဖောက်သည်များထံ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခြင် client တစ်ခုစီအတွက် သီးခြား Job Follow Up တွင် အလုပ်အားလုံးကို အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်း (ဖုန်းနှင့် မေးလ်နှစ်ခုလုံး) သူ/သူမနှုတ်ထွက်ချိန် သို့မဟုတ် မန်နေဂျာမှထွက်သွားစဉ် အခြားဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအရာရှိအတွက် အရန်သိမ်းပါ။ မန်နေဂျာထံ နေ့စဉ်နှင့် အပတ်စဉ် အစီရင်ခံပါ။ ငွေတောင်းခံလွှာအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ အလုပ်သွားမည့်ရက်ကို နေ့စဉ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပြီး အလုပ်အားလုံးကို အချိန်ဘောင်အတွင်း ပြီးမြောက်အောင် ထိန်းသိမ်းပါ။ ရှင်းလင်းရေးနှင့် ကုန်တင်ယာဉ်အဖွဲ့များမှ သက်ဆိုင်ရာ အဓိကပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်စသည်ဖြင့်။
အကျိုးအမြတ်: စွမ်းဆောင်ရည် ကျော်လွန်ခြင်းအတွက် ဆုလာဘ်များ
တင်သောနေ့: 01 Nov 2021
 တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။  English စကားအားနားလည်ပြီး ပြောနိုင်သူအား ဦးစားပေးမည်။  ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး၊အသင်းအဖွဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်နိူင်သူဖြစ်ရမည်။  နေ့/ည တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
တင်သောနေ့: 28 Oct 2021
Fb/viber များမှ Customer order များကောက်ယူခြင်း၊ Order Comfirm ဖြစ်သောအထည်များကို မှန်ကန်စွာ ငွေတွက်ပေးရန်။ Online Store အတွင်း Customer Order များကို သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတွင်း ရှာပေးရန်။ FB /Viber များမှ Customer အမေး၊အဖြေများကို အချိန် နှင့် တစ်ပြေးညီ ဖြေကြားပေးပြီး Order ကောက်ပေးရန်။ သက်ဆိုင်ရာ မန်နေဂျာ၏ ညွှန်ကြားချက်များကို Support ပေးရန်။
- Member များနှင့်ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရမည်။ - Member နှင့် Non-member သိလိုသည်များကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ လိုအပ်အပ်သည်များကိုကူညီပေးနိုင်ရမည်။ - လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးရမည်။ - Gym သို့အဝင်အထွက်များကိုသေချာစီစစ်နိုင်ရမည်။ - အရောင်းမှရရှိသည့်ငွေစာရင်းများကိုထိန်းသိမ်း၍ စာရင်းဇယားသေချာပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ - Members များ facilities နှင့် gym machines များအသုံးပြုရာတွင်လုံခြုံစိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ကူညီပေးရမည်။
BEM courier sevice ( Mandalay)
ချမ်းအေးသာဇံ | မန္တလေးတိုင်း မန္တလေးတိုင်း
ကွန်ပြူတာကျွမ်းကျင်ရမည်။ Word Excel စာရိုက်ခြင်း မြန်ဆန်ရမည်။ ယဉ်ကျေးပျူငှာစွာ ပြောဆိုနိုင်ရမည်။ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Delivery Service နယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးခန့်ထားပါမည်။
Chan Myae Myittar Hospital (Thanlyin)
သံလျင် | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
-Front Office ဌာန၏ အလုပ်တာဝန်များ၊ Customer Service ပိုင်းများ ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -မိမိအလုပ်တာဝန်များကို သိရှိပြီး မိမိဌာန၏ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိသူဖြစ်ရမည်။ -မိမိဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများကို သင်ကြားပြသပြီး အဖွဲ့၏ စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်အောင် ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -English စကားအသင့်အတင့် ပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -ဆေးရုံမှ ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းများကို လိုက်နာနိုင်ရမည်။ -လစာညှိနှိုင်း
တင်သောနေ့: 27 Oct 2021